ह्विप उल्लङ्घन गर्ने तीन सांसदलाई मन्त्री पद उपहार
वैशाख ४, काठमाण्डौ । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले
सरकार ढाल्ने खेलको खबरदारी गरौँ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
वैशाख ४, काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक खिचातानीले सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । शनिबार काठमाडौको हाँडिगाउँस्थित टुवालदेवी मन्दिर नजिकैको सतल उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै
वैशाख ३, काठमाण्डौ । साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको ९७ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । वि.स. १९८१, श्रावणमा काठमाडौमा जन्मिएका वैष्णवको आज घरमै निधन भएको हो । उनको पहिलो रचना
वैशाख ३, काठमाण्डौ । काठमाडौँमा बिहीबार साँझ हुरी चलेको थियो । कतै फाट्टफुट्ट वर्षा पनि भएको थियो । शुक्रबार भने दिउँसोदेखि असिनासहित वर्षा भएको हो । स्थानीय वायु र पश्चिमी
एमाले विभाजनको मुखमा, अब के बाँकी रह्यो र ?
वैशाख ३, काठमाण्डौ । यतिबेला नेकपा एमाले अनौपचारिक रुपमा दूईवटा दल बनिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अध्यक्ष केपी ओली एकातिर र वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल अर्कातिर । फागुन
वैशाख २, काठमाण्डौ । सन १९८४ मा नेपालको ललितपुरबाट चोरी भएर अमेरिकामा फेला परेको लक्ष्मी नारायणको मूर्ति पुरातत्व बिभागले जिम्मा लिएको छ । साथै उक्त मुर्तिलाई सुरक्षित साथ राख्नका लागि
कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा फैलिदै, नियन्त्रणका लागि सरकार र सर्वसाधारण उदासिन
चैत २९, काठमाण्डौ । चैत २३ गतेदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि २ सय जना नाघेको छ । चैत २६ गतेबाट ३ सय माथि पुगेको छ । संक्रमितको संख्या दैनिक
नक्कली मोही खडा गरेर हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता
चैत २७, काठमाण्डौ । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ अन्तर्गतको जग्गामा सरकारी बोर्ड राखेको छ । काठमाडौं पहेलो पुलस्थीत सरकारी जग्गालाई भूमाफियाले प्रयोग गरेपछि शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र
अफ्रिकन रुट एसोसियसन आहा रारा गोल्डकपको फाइनलमा
चैत २६, काठमाण्डौ । अफ्रिकन रुट एसोसियसन पोखरामा जारी १९ औ संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पोखरा रंगशालामा बिहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई
न्यु डाईमण्ड स्पोर्ट्स क्लब र हेल्प नेपाल क्लबलाई भलिबल उपाधि
चैच २६, काठमाण्डौ । पाँचौं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिला तर्फको उपाधि न्यु डाईमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कर्भडहलमा
संसदीय समितिमा सांसदको दलीय उपस्थितीमाथि प्रश्न
चैत २६, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वको हैसियत र सङ्ख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग
संसदमा जुहारी : गगन भर्सेस महेश
चैत २६, काठमाण्डौ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षका सांसदहरुबीच सरकारका बिषयमा चर्काचर्की परेको छ । कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै राजीनामासमेत मागे भने